ရေ ရှားတဲ့ နွေမှာ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေကြောင့် ရောဂါတွေမဖြစ်စေဖို့ - Hello Sayarwon
ရေ ရှားတဲ့ နွေမှာ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေကြောင့် ရောဂါတွေမဖြစ်စေဖို့
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 08/04/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အဟမ်း….. အဟမ်း…. ရာသီဥတုကြေညာချက်လေးထုတ်ပြန်ပါရစေ။ အခုဆိုရင်ဖြင့် ပူပြင်းတဲ့ နွေရာသီကိုရောက်လာပါပြီနော်။ နွေရာသီမှာ အပူချိန်မြင့်တာကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားပါနော်။ နွေပူပြင်းမှုနဲ့အတူ ထပ်ခံစားရနိုင်တာက ရေရှားတာလေနော်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေပေါများပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့် သောက်ရေ၊ သုံးရေရှားပါးလာပြီဖြစ်သလို ရာသီဥတုမမှန်တာကြောင့်လည်း ရေပြတ်လပ်မှုတွေခံစားကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေရှားတဲ့ နွေရာသီရောက်ရင် မသန့်ရှင်းတဲ့ ရေ ကြောင့် ရောဂါတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ရေအသက် တစ်မနက်ပါနော်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ရေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ရေလုံလောက်စွာရပါမှ ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ရေက ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းညှိပေးပြီး အဆစ်တွေကို လှုပ်ရှားမှုကောင်းစေပါတယ်။ ဆီး၊ ဝမ်းနဲ့ ချွေးကနေတဆင့် ကိုယ်တွင်းက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးတာကလည်း သောက်သုံးရေပါနော်။
သန့်ရှင်းတဲ့ရေ လုံလောက်အောင်မရရင် ဘာဖြစ်မလဲ
သန့်ရှင်းတဲ့ရေ မရလို့ လုံလောက်အောင် မသောက်နိုင်တဲ့အခါ
ခန္ဓာကိုယ်ကနေလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တော်တော်များများကို အဓိကပံ့ပိုးထားသူက ရေဓာတ်ပေါ့။ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေကလည်း တော်တော်လေးများပါတယ်နော်။
အော့အန်တဲ့အခါမျိုးမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့တာအတွက် ရေ လိုအပ်ချက်
လူတစ်ယောက် ကျန်းမာနေဖို့ တစ်နေ့တာမှာ ရေ ၈ ခွက်သောက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါက အခြေခံသတ်မျတ်ချက်ပေါ့။ အတိအကျပြောပြရရင် အမျိုးသမီးတွေကနေ့စဉ်ရေ ၈ ခွက်ကနေ ၁၁ ခွက် (၉၁အောင်စ) သောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကတော့ မိမိလိုအပ်ချက်အလိုက် နေ့စဉ်ရေ ၁၅ ခွက် (၁၂၅အောင်စ) သောက်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ မဖြစ်မနေသိထားရမှာက သောက်လိုက်တဲ့ ရေတိုင်းဟာ သန့်စင်ဖို့ပါနော်။
ရေ မသန့်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ
ရေသန့်တယ်လို့ တင်စားဖို့ကတော့ ရေက အရောင်အဆင်းအနံ့အရသာကင်းရမယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ်ကတည်းက သင်ခဲ့ရတာပါနော်။ ရေသန့်ဖို့က မဖြစ်မနေလိုအပ်တာပါ။ သောက်ရေက ရေသန့်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ ရေသန့်ဘူးတွေကို မဖြစ်မနေသောက်ရမယ်လို့ ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရေကို စနစ်တကျသန့်စင်သောက်သုံးဖို့ တိုက်တွန်းချင်တာပါ။ ရေက သန့်ရှင်းမှုအားနည်းတဲ့အခါ
သန့်ရှင်းတဲ့ သောက်သုံးရေဖြစ်ဖို့ ဒီနည်းလေးတွေက အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ရေတော့ရှိပါရဲ့ သောက်ဖို့အတွက် မသန့်ဘူးဆိုရင် ဒီနည်းလေးသုံးပြီး သန့်စင်လိုက်ပါနော်။
ရေကို ကျိုချက်လို့ သောက်ပါ
သန့်စင်တဲ့ ရေအရင်းအမြစ်မရှိဘူးဆိုရင် ရေကိုကျိုချက်သောက်ရမယ်ဆိုတာက တော်တော်များများတော့ သိထားပြီးသားပါ။ ရေထဲမှာပါနေတဲ့ မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် ရေကို ပိတ်စပါးပါးလေး ဒါမှမဟုတ် ရေစစ်နဲ့စစ်ပြီး ရေပွက်ပွက်ဆူတဲ့အထိ တည်ပေးပါနော်။ ပြီးရင်တော့ အအေးခံပြီးသောက်လို့ရပါတယ်။
ရေကို ကျောက်ချဉ်စိမ်ပြီး ညသိပ်ထားပေးပါ။ ကျောက်ချဉ် က ပိုတက်ဆီယမ်ကျောက်ချဉ်ဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါမယ်နော်။ ရေပမာဏကိုလိုက်ပြီး ကျောက်ချဉ်ထည့်ရတဲ့ ပမာဏကလည်း ကွာပါမယ်နော်။ ရေသန့်စေတဲ့ သဘာဝနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
ရေသန့်စေဖို့အတွက် ကျောက်မီးသွေး၊ သဲသန့်သန့်တို့ကိုသုံးပြီး ရေစစ်လို့ရပါတယ်။ ခွက်အလွတ်တစ်ခုထဲမှာ သဲတစ်ထပ်၊ မီးသွေးတစ်ထက်ထည့်ပြီး အောက်ဘက်မှာ အပေါက်လေးတွေ ဖောက်ပေးပါ။ ပြီးရင်အောက်မှာ ခွက်အသန့်တစ်ခုခံလို့ ရေတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းချပေးပါ။ တစိမ့်စိမ့်နဲ့စစ်ထားလေ ရေကသန့်လေလေပါနော်။ ပြီးရင်တော့ ရေကိုပြန်စစ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေက ရေစစ်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကျောက်စရစ်နဲ့ သဲသန့်သန့်လေးတို့ကို သုံးပြီး ခွက်တစ်ခုထဲမှာ တစ်ထပ်စီထည့်ပြီး ခွက်အောက်ဘက်မှာ အပေါက်လေးတွေ ဖောက်ပေးပါ။ ပြီးရင် အောက်ဘက်မှာ ခွက်အသန့်တစ်ခုခံလို့ ရေတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းချပေးပါ။ တစိမ့်စိမ့်နဲ့စစ်ထားလေရေက သန့်လေလေပါနော်။ ပြီးရင်တော့ ရေစစ်လေးနဲ့ ပြန်စစ်ပေးပါ။
ဖွဲပြာနဲ့ သဲသန့်သန့်လေးတို့ကို သုံးပြီးတော့လည်း ရေစစ်လို့ရပါသေးတယ်နော်။ ခွက်တစ်ခုကို အောက်ခြေဘက်မှာ အပေါက်ဖောက်လို့ ပိတ်စပါးပါးလေးတစ်ခုအရင်ခံလိုက်ပါ။ ပြီးရင် သဲတစ်ထပ် ဖွဲပြာတစ်ထပ်စီထည့်ပါ။ အောက်ဘက်က ခွက်အသန့်တစ်ခုခံလို့ အပေါ်ကနေရေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းချပေးပါ။ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ စစ်ထားလေ ရေကသန့်လေလေပါနော်။ ပြီးရင်တော့ ရေစစ်လေးနဲ့ ပြန်စစ်ပေါ့။
ရေကို သဲအိုးထဲမှာ ညသိပ်ပေးတာကလည်း ရေသန့်စင်နည်းတစ်မျိုးပါနော်။ ရေက ဆိုးဆိုးရွားရွား ညစ်ပတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင် သဲအိုးထဲမှာ တစ်ညသိပ်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကလည်း ရေသန့်စင်နည်းတစ်ခုပါ။ သောက်ရေသန့်တစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့ အသုံးပြုသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့။ အိုင်အိုဒင်းက ရေထဲမှာပါတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကိုသေစေနိုင်ပါတယ်နော်။ ရေကို အိုင်အိုဒင်းမခတ်ခင်မှာ နေပူအရင်ပြရပါမယ်။ ရေကနွေးလာပြီဆိုရင် အိုင်အိုဒင်းထည့်ပေးရပါမယ်။ အညွှန်းပါတဲ့အတိုင်း အတိအကျလိုက်ဖို့တော့လိုပါမယ်။ အိုင်အိုဒင်းခတ်ထားတဲ့ရေကို မိနစ် ၃၀ ကြာထားပြီးမှ သောက်ရပါမယ်။
အရေးပေါ်ရေသန့်စင်နည်းတစ်ခုပါ။ ကလိုရင်းဆေးပြားကိုသုံးပြီး ရေသန့်စင်ပေးတာပါ။ ကလိုရင်းဆေးဘူးမှာပါတဲ့ အညွှန်းအတိုင်း အတိအကျလိုက်ဖို့လိုပါမယ်။ရေထဲက မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ ပိုးမွှားတွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကတော့ရေ ၄ လီတာကို ကလိုရင်းဆေးရည် ၁၆ စက်၊ ၂ လီတာကို ကလိုရင်းဆေးရည် ၈ စက် ဆိုပြီး ချပေးရတာပါ။ မသောက်သုံးခင်မှာ ခဏတော့စောင့်ပေးဖို့လိုပါမယ်နော်။
ကဲ Hello ဆရာဝန်ပရိသတ်ကြီးတို့ နွေပူပူမှာ သောက်စရာရေချိုရေသန့်ရှားပါးတာကြောင့် မသန့်တဲ့ရေတွေကို သောက်မိပြီးရောဂါဖြစ်တဲ့ ဘေးက ကင်းကြပါစေကြောင်း ……….
Drinking Water Quality: What You Need to Knowhttps://www.webmd.com/women/safe-drinking-water#1 Accessed Date 21 March 2019
3 Ways to Purify Water –Naturallyhttps://www.onegreenplanet.org/lifestyle/purify-water-naturally/ Accessed Date 21 March 2019
25 Great Ways How To Purify Water For Drinkinghttp://all-about-water-filters.com/great-ways-how-to-purify-water-for-drinking/ Accessed Date 21 March 2019
How do you purify dirty pond water for drinking?https://www.quora.com/How-do-you-purify-dirty-pond-water-for-drinking Accessed Date 21 March 2019
How to Purify Water at Homehttps://www.livestrong.com/article/79333-purify-water-home/ Accessed Date 21 March 2019
နွေပူပူရဲ့ trademark ကြံရည် ချိုချိုလေး
နွေနေပူပူ မှာ ဒါတွေဆောင်ထားပါ
နွေရာသီမှာ အပူဒဏ်ကြောင့် အန္တရာယ်မဖြစ်စေဖို့ ဒါတွေစားပါ
ဆီးချိုရှိသူတွေ အတွက် နွေရာသီစားသောက်နည်းလမ်းညွှန်